Namni Mormii Ummataa Goondar keessatti gaggeeffamaa jiru ilaale garaagarummaa guddaa ummata keenyaafi ummata Amaaraa jidduu jiru salphatti ni hubata jedheen amana. Ummanni Oromoo meeshaan waraanaa innii harkaa qabu xiqqaa hanga guddaatti harkaa guuramee balaa kamiyyuu ofirraa qolachuu akka hin dandeenne godhameera.
Wayta Dhaabni Amaaraa BIADEN ummata ofii harka jalaan hidhachiisu, gowwaan kan keenya OPDOn immoo Wayyaanee jala shelleqqachuudhaan ummata harka duwwaatti hambise. Sababakanaanis lammiin keenya diina Tigraayii dhufaniin guyyaa addiin qalame, halkaniin ajjeefamee raasatti gatame, lubbuu isaatti qoosame....
Kunoo, dhugaan har'a ifatti baatee jennaan namni martu argee hubate. Amaarri xiqqaa hanga guddaatti hidhachuun isaanii diina isaan fixuuf qophaaye gatantarsee hambise. Poolisoonni naannichaas saba isaanii miidhurraa of qusatan. Kan keenya garuu ganda ganda keessa adeemee, mana manaa guuree, haadholii garaa ulfaa osoo hin hambisin ajjeesee ajjeesisiise. Kun yakka bara baraati. Seenaan galmaayaa jira, isaanis boru gaafii jalaa akka garamiyyuu miliquu hin dandeenne beekutu siaanirra jiraata. Badiin isaanii kaleessaa suni hundi akkuma jirutti ta'ee yeroo ummanni gara hundaa kaka'ee, kufaatin mootummaa saba Tigree kufuuf gatantaraa jiru kanatti ummata ofii waliin hiriiranii saba ofii yeroo dhumaatiif cunqursaa jaarraa tokkoof irra ture jalaa baasuf gahee isaanii tapachuu dandahanitti ammas hirriba hamaa keessa jiraachun isaanii waan baay'ee nama ajaa'ibuudha.
Waan Hundaafuu; Itti Himan Didduun Du'a Hin Diddu jedha Oromoon!